Pandas dia be eny amin'ny araben'ireo tanàna mediteraneanina taorian'ny fampielezan-kevitry ny fizahan-tany "China Shina, Mihoatra ny Pandas"
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » China Travel News » Pandas dia be eny amin'ny araben'ireo tanàna mediteraneanina taorian'ny fampielezan-kevitry ny fizahan-tany “Sina tsara tarehy, mihoatra ny Pandas”
Pandas dia be eny amin'ny araben'ireo tanàna mediteraneanina taorian'ny fampielezan-kevitry ny fizahan-tany “Sina tsara tarehy, mihoatra ny Pandas”
Nandritra ny 20 andro voalohany tamin'ny volana jona tamin'ity taona ity, natomboka tany Sipra sy Espana ny “China Beautiful, More than Pandas”, fampielezana varotra fizahan-tany lehibe eran-tany izay natolotry ny China National Tourism Administration ary tantanan'ny Komisionan'ny faritany Sichuan ho an'ny fampandrosoana fizahantany. miaraka amin'ny pandas galore mandehandeha eny amin'ny araben'ireo tanàna telo itodiana.
Tao Lefkosia, Siprosy ary tany Madrid sy Barcelona, ​​Espana, ilay dihy flashmob panda sinoa nilalao fatratra dia nahasarika ny sain'ny olona ary nampientanentana ny mponina sy ny mpizahatany nitsidika ireo tanàna telo manerantany. Betsaka ny mpandalo no naka sary «selfie» niaraka tamin'ny panda hosodoko raha ny zaza kosa nirotsaka tamin-kafanam-po tamin'ny fanaovana sary hosodoko panda "do-it-yourself". Ny lovia malaza Sichuan malaza izay naroso tamin'ity hetsika ity dia nahazo fanamarihana mahafinaritra avy amin'ireo eropeana marobe izay nanandrana ireo sakafo matsiro. Ny fihetsiketsehana ny Sichuan Opera Face kilasika sy ny kolontsaina dite atsinanana mahavariana mahavariana dia teboka nifandimby tamin'ny hetsika mivantana.
Nandritra ny fampielezan-kevitra momba ny varotra izay natao tany amin'ny tanàna telo manerana ny firenena roa, ny lohahevitr'ilay hetsika - "Sichuan - ilay tany mahavokatra" - dia nazava tsara tamin'ny mpijery, izay maro amin'izy ireo dia avy amin'ny lafivalon'i Eropa. Ny sary dia nitantara ny tantara, ao anatin'izany ny fahitana voajanahary tsara tarehy ao amin'ny faritany, ny tantara lava sy ny kolontsaina lalina ary koa ny zava-bita ara-toekarena tao anatin'izay taona vitsivitsy izay. Ny famelabelarana manokana dia nanisy antsipiriany ny làlan'ny fizahan-tany nentim-paharazana maro ho an'ireo vahiny liana. Ny fikambananan'ny fizahan-tany sinoa sy tandrefana dia nanao fifanarahana fiaraha-miasa hizara ny fandaminana ny fizarana miditra sy ivelany ho an'ny mpandeha ary hampiroborobo ny fampandrosoana ny fizahantany.
Ny lanonana mari-pankasitrahana Restaurant Sichuan Cuisine malaza miaraka amin'ny fifaninanana eo anelanelan'ny Sichuan mpitarika sy ny chef eropeana dia nahatonga ny fifanakalozana hevitra teo anelanelan'ny chef an'ny nahandro isan-karazany. Ny fitsangatsanganana an-tsehatra momba ny sivilizasiona taloha any Sina Sichuan dia nanala ny zava-miafina sasany izay tsapan'ny Tandrefana rehefa tojo kolontsaina sy fomba amam-panao tatsinanana. Ny fikambanana fizahan-tany manerantany sy ireo mpiara-miasa aminy sinoa dia niresaka momba ny fampandrosoana ny vokatra, ny marketing iraisana ary koa ny ezaka eo amin'ny fikambanana hampiroboroboana ny fizahantany amin'ny lafiny roa tonta.
Ny United Nations World Tourism Organisation dia hanao ny fivoriana plenary faha-22 ao Chengdu renivohitr'i Sichuan, amin'ity volana septambra ity. Ireo manampahefana misahana ny fizahan-tany any amin'ny faritany koa dia mampiasa ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing ho fitaovana hanasana ireo antoko liana hanatrika ny fivoriana.
Ny minisitry ny fiaramanidina sivily dia mijery ny fivoaran'ny tobin'ny mpandeha an-trano vaovao any amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Seychelles
Fairfield by Marriott dia manokatra hotely voalohany any Shina